The Bible na-ekwu, i kwesịrị anabata Jizọs | Apg29
The Bible na-ekwu, i kwesịrị anabata Jizọs
All nke amaokwu ndị a na-egosi na i kwesịrị anabata Jesus!
Anyị na-ahụ na Bible akụzi n'ụzọ doro anya anyị na anyị ga-anabata Jizọs Kraịst. Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-ekwu, ma, ọ na-aga megide ozizi ndị Bible na a nnọọ mkpa isiokwu.
Akwụkwọ Nsọ kwuru hoo haa na onye ga-anabata Jizọs
Luke 9:48, si ha, Onye ọ bụla nke na-anabata nwatakịrị a n'aha m na-anabatakwa m. Na onye ọ bụla nke na-anabata m na-anabatakwa onye ahụ nke zitere m. N'ihi na onye na bụ kasị nta n'etiti unu niile, na ọ ga-adị ukwuu. (Gụọ Mak 9:37, Matthew 18: 5 na Luk 18:17)
Luke 10:38 O mere mgbe ha na-aga, ọ batara a obodo, na a nwaanyị aha ya bụ Mata natara ya n'ime ụlọ ya.
Luk 19: 6 Ndien enye awara gbadata na natara ya na ọṅụ. (Gụọ Ọrụ 2:41 na Rom 5:11)
John 1:12 Ma dị ọtụtụ dị ka natara Ya , ha ka O nyere ike ighọ umu Chineke, ha na kweere na aha ya.
John 4:45 Mgbe ọ bịara na Galili, were ndi Galili nara ya , mgbe ha hụrụ ihe niile o mere na Jeruselem n'oge ememme, n'ihi na ha na-ama e n'ememe.
John 13:20 N'ezie, n'ezie, ana m asị unu, Onye na-anabata onye ọ bụla nke m zitere na, na-anabatakwa m, onye ọ bụla nke na-anabata m , ọ na-enweta ya bụ onye zitere m.
Gal 4:14 Ma gbakee m tara ahụhụ n'anụ ahụ m, na-eleda anya na jụrụ bụghị unu, ma unu natara m dị ka onye-ozi Chineke, ee, na Kraịst Jizọs .
Ndị Kọlọsi 2: 6 Dị ka unu ugbu a natara Christ Jesus Chineke , ya mere, na-ebi ya,
Mkpughe 3:20 Lee, m guzo n'ọnụ ụzọ na iku aka. Ọ bụrụ na onye ọ bụla anụ olu m ma ga-emepe ụzọ, m ga-abịa ya iri nri na-ya, na enye m. (Ị na-enweta Jesus site mmeghe ụzọ nke obi.)
Ọbụna ihe akụkụ Akwụkwọ Nsọ
Ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ akụkụ Bible ndị na-agakọta na ịnakwere Jizọs, nke ka ihe atụ, na-ekwu na ha "natara okwu", "natara mkpuchi mmehie," na na.
Luke 18:17 N'ezie asim unu, Onye na-adịghị na-enweta alaeze nke Chineke ka a na nwa ga-aga n'ebe ahụ.
John 3:33 Onye na-anabata àmà na-egosi na Chineke bụ onye eziokwu.
Ọrụ 2:41 Mgbe ahụ, ha na obi ụtọ natara okwu ya , e meekwa ha baptizim, na ụba ọgbakọ na ụbọchị banyere puku mkpụrụ obi atọ.
Ọrụ 11: Olee otú ndịozi na ụmụnna nọ na Judia nụrụ na ndị mba ọzọ na-ama natara okwu Chineke .
Rom 5:11 Ma ọ bụghị naanị nke ahụ, kama anyị na-aṅụrịkwa ọṅụ n'ime Chineke site n'aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, onye e si n'aka anyị ugbu a natara isop .
Rom 5:17 N'ihi na ọ bụrụ na ọnwụ bịara ibu eze mgbe iwe site na otu, mgbe ahụ, ihe ndị ọzọ ha nke na-enweta ukwuu nke amara na onyinye ezi omume , ịchị ndụ otu, Jesus Christ.
1 Ndị Kọrịnt 15: 1-2 Ma m na-echetara gị, ụmụnna anyị, banyere gospel m kwusara ozi ọma unu, nke unu na-natara , na nke ị na-eguzosi ike na, site na nke ị na-na-azọpụta, ọ bụrụ na ị ịnọgide na okwu m ezisara unu, ma ọ bụghị ị bịara kwere n'efu.
E nwere ọtụtụ ihe Akwụkwọ Nsọ banyere isiokwu a. Ka ihe atụ, m na-eme na-adịghị ọbụna Bible see okwu na-ekwu na ha na-anabata Jizọs, na mgbe anyị na-aghọta na ha ga-anata ya.
N'ihi ya, anyị na-ahụ na Bible akụzi n'ụzọ doro anya anyị na anyị ga-anabata Jizọs Kraịst. Iji-azọpụta ma a nwa Chineke, ị ga-anabata Jizọs!
Anata Jesus ugbu a
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka a zọpụta, ị na-enweta ugbu a, Jizọs na nke a ekpere, ị na-ekpe ekpere n'olu dara ụda na ọnụ gị Jesus:
Biko gwa m ma ọ bụrụ na ị na ugbu a natara Jizọs na ọkọdọ zọpụta!